China Model: JM272QE-144Hz fekitori uye vagadziri | Yakakwana Ratidza
Iwo maQHD anoonekwa anotsigirwa zvine mutsindo neiyo inoshamisa inokurumidza 144hz yekuvandudza mwero kuona kuti kunyangwe kumhanyisa-kufamba kwekuteedzana kunoratidzika kunge kuri kutsetseka uye kune zvakadzama, zvichikupa iwe iwo wakawedzera mupendero kana uchitamba mutambo. Uye, kana iwe uine inoenderana AMD kadhi yemifananidzo, ipapo iwe unogona kutora mukana weiyo yakavakirwa-yakavakirwa muFreeSync tekinoroji kubvisa chidzitiro kubvarura uye stutter kana uchitamba mutambo. Iwe zvakare unokwanisa kugona kufambidzana nechero-husiku husiku mitambo yemamarathoni, sezvo iyo tarisiro iine screen mode iyo inoderedza kusvibiswa kune bhuruu mwenje kuburitsa uye kunobatsira kudzivirira kuneta kwemaziso.
1MS Nguva Yekupindura inoderedza kufema & kupenya apo uchichinja mapikisheni, uchigara uchichengeta muvengi nenzvimbo zvakaringana mukutarisa munguva dzekusangana.
10 Bhuru ruvara kuburitsa Inogona kumiririra pakati pe 0000000000 kusvika 1111111111 mune yega yega tsvuku, bhuruu, uye yero mavara, zvichireva kuti imwe inogona kumiririra 64x mavara e8-bit. Izvi zvinogona kubereka 1024x1024x1024 = 1,073,741,824 mavara, inova iri rakakura kwazvo huwandu hwakawanda kupfuura masere masere. Neichi chikonzero, mazhinji emadhigidhi mumufananidzo anozotaridzika kunge akatsetseka kunge ari mumufananidzo uri pamusoro, uye gumi gumi mifananidzo iri kutaridzika zviri nani kupfuura vamwe vavo masere-bit.
Pashure: Muenzaniso: YM25BFN-165Hz
Zvadaro: Muenzaniso: OG34RWA-165Hz